Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop qaybtii 6aad | Abuurista khadka tooska ah
Antonio L. Carter | | Design Graphic, Naqshadeynta Webka, Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, Tababarada
Waxaan kusoconaa casharka Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop qaybtiisa lixaad, halkaas oo aan ka bilaabi doonno midabka sawirka aaladda aan u isticmaalnay inaan ku horumarinno tan tutorial, iyo in aan ka heli doonno dhammaadka qaybta ugu dambeysa ee ka kooban, haddii ay dhacdo inaan dooneyno inaan ku sameyno isla walxaha aniga oo kale ah, oo aan kugula talin lahaa markii la sameynayo waayo-aragnimada barista / barashada ee aan soo jeedinayo ka sii badin iyo nidaam. Adobe Photoshop waxay leedahay dhowr qalab midabayn y hadh sawiradayada, iyo tan tutorial Waxaan ku dabaqi doonnaa dhowr ka mid ah si aan u dhameystirno farsamada aan soo jeedinayo ee ah intirsiinta iyo midabeynta sida ugu dhameystiran ee suurto galka ah, adiga oo ku siinaya fursado dhowr ah, adiga oo wata fikradda ah inaad heysato midka ugu habboon baahidaada. Naar aan galno.
Hadday ku jirto tutorial hore,Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradeena Adobe Photoshop (qeybta 5-aad), wuxuu sharraxay adeegsiga aan ka samayn doonno kanaallada iyo sida loo sameeyo xulashada kanaalka, markii la kala saarayo walxaha kala duwan si loogu midabeeyo tusaalaheenna tusaalaha ah ka dibna loo sameeyo loona magacaabo, hadda waxaan bilaabi doonnaa midabayn aaladda aan jecel nahay.
1 Bilaabida inaad midab siiso
3 Midabaynta buuxinta
4 Adobe Kuler Colors
Bilaabida inaad midab siiso
Si loo bilaabo, waa inaan sameyno Ctrl + Bidix guji mid ka mid ah thumbnails ee kanaalka Palette Channel ka kooban xulashooyinka kala duwan ee aan ka sameynay canaasiirta inay ahaadaan midabayn. Waxaan doortay jirka oo dhan waxaanan diyaar u ahay inaan u isticmaalo midab u yeelo kala duwan oo casaan iyo bunni ah, oo leh taabashada liinta. Waan yeelayaa midabayn ka dibna hadhSi kastaba ha noqotee, sidoo kale waa la midabeyn karaa marka hore ka dibna hoos ayaa loo dhigaa, waa mid aan dan ka lahayn qaybtan geeddi-socodka ah.
Waxaan galnaa wadada Isku-hagaajinta Sawirka-Hue / Saturation, kanaalka Jirka kaas oo ah midka ay ku jiraan xulashada aan daweyneyno, waxaanan bilaabaynaa inaan ku darno midabka iyo qadarka midabka aan dooneyno. Waxaan kugula talineynaa inaan ku ciyaarno qiyamka kala duwan ee ay bixiso Liiska qalabka, illaa aan ka badan ama ka yar xakamaynno.
Si aad midab u siiso waa inaad ka tagtaa sanduuqa la riixay Midab. Kadibna waxaan u dooranaynaa midabada xulashooyinka kala duwan, kanaal kanaal, illaa aan ku guuleysaneyno inaan ku dabbaqno midabka iyo codka la rabo dhammaan walxaha sawirka, oo aan horay ugu kala soocnay kanaallo.
Waxaan kugula talinayaa farsamadan, iskudayida midabyo kala duwan, oo leh noocyo kala duwan, illaa aan ka helno midka aan jecel nahay. Si tan loo sameeyo, markii aan ku dhajineyno sawirka, oo ka buuxan caddaan una diyaarsan midab, kaliya waa inaan nuqul ka sameysannaa lakabkaas dhowr jeer si aan ugu celcelin karno sida ay doonaan.
Hab kale oo lagu midabeeyo Adobe Photoshop, ayaa adeegsanaya aaladda Buuxi, kaas oo wadada maraya Tafatir - Buuxi, ama habka kumbuyuutarka Wareejinta + F5. Qalabkani wuxuu inaga buuxinayaa midabka aan dooranay xulashada aan sameynay daqiiqadaas, kana bilaabaya midabada Hor iyo gadaal. In kasta oo ikhtiyaari midabaynta hore ay ka dhakhso badan tahay oo si fiican u dhammaynaysa sidaan jeclahay, haddana farsamadan waxaan la yeelan doonnaa is-dhexgal ballaaran Layers Palette Labadaba mid ama mid kale oo farsamo ah, waxaan kula shaqeyn karnaa noocyo midabyo ah oo toos looga soo dejistay Adobe kuler, taas oo ah arjiga internetka ee Adobe taasi waxay soo saartaa noocyo kala duwan oo midab ah, taasina waa habka ugu fiican ee naqshadeyntayada oo dhan ay ugu habboon tahay. Si aan u bilowno midabaynta, waa inaan kaliya ka abuurnaa lakab madhan galka midabka, hab kan ugu horeeya uu u haray ka dibna aan u bilowno xulashada kanaalka iyo midabaynta, si aan ugu shaqeyno marka hore kuwa ka sii badan xagga dambe ka dibna aan kor u kacno. Kaliya waa inaan xamuulnaa midabada aan dooneyno inaan ku isticmaalno palette gaashaaman ka dibna aan u dooranno sida aan u adeegsanno. Si aad u bilowdo buuxinta, riix Wareejinta + F5 oo geli sanduuqa wadahadalka aaladda. Midabada waxyar uga shaqee halkan.
Si aad u isticmaasho barnaamijka Adobe kuler, waa inaan galnaa bogga Adobe kuler oo noo samee profile. Kadib waxaan dooran doonnaa qaab midab ah oo aan ku keydinayno adoo siinaya Save, ka dibna ka soo dejiso miisaska waxqabadka ee gudaha Qaabka ASE. Markaan soo dejisanno, si aan u isticmaalno kaliya waa inaan tagnaa liiska xulashooyinka ee Muunado Palette oo sii ikhtiyaarka aad ku shubi karto shay-baarka.
Markaad soo dejineyso, hubi in nooca feyl ee aan ka raadineyno sanduuqa wada hadalka uu yahay kan Åse, oo ah midka aan soo dejinay. Marka la rakibo, dhamaadka liiska midabka ah Muunado Palette. Halkan waxaan ka dooran doonaa midabada aan ku siin doono sawirkeena.
Qaybta xigta iyo tan ugu dambeysa ee tan tutorial, Waxaan kuu sharxi doonaa sida loogu sawiro sawirkaaga xulashada kanaalka, kaas oo imaan doona marka loo eego si loo siiyo saameyn iftiin leh sawirka adoo xakameynaya dhinac kasta oo hoos kasta ah, marka lagu daro inaan kuu daayo feylka la soo dejin karo dhamaadka, halka laga reebo Burush, Kala duwanaansho midabaynta ama PSD, Waxaan kuu daynayaa sawirada casharka. Ha moogaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradeena Adobe Photoshop (qeybta 6-aad)
Glyphr, tifaftire font oo bilaash ah
5 Fonts Bilaash ah ee 2014 si loogu isticmaalo mashaariicdaada cusub